Augustine Mahiga oo qoob ka ciyaar la ciyaaraya hablo Soomaaliyeed (Daawo) – SBC
Augustine Mahiga oo qoob ka ciyaar la ciyaaraya hablo Soomaaliyeed (Daawo)
Wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Ambasador Augustine Mahiga ayaa wacdaro qoob ka ciyaar ah wuxuu ka dhigay xaflad ay isagu yimaadeen Jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka.
Xaflada oo heeso kala duwan lagu soo bandhigay ayaa ugu dambeyntii markii ay isku daba dhacdey oo qoob ka ciyaar la galay ayaa waxaa is hayn kari waayey oo xafladii jaanta la helay Mahiga oo si aan caadi aheyn ugu baashalay heesihii halkaasi laga qaaday ee Soomaaliga ahaa.
Intii uu socdey qoob ka ciyaarkaasi ayaa waxaa laga arki karey Mahiga oo si la yaab leh isagu badbadlaya gabdho Soomaaliyeed oo music la ciyaaraya kuwaasi oo ay ka helay qoob ka ciyaarkiisa.
Dad badan ayaa iswaydiinaya sababta ku xambaartey Mahiga in uu ilaa heerkaasi la gaaro hablo Soomaaliyeed oo qaarkood ay ku faraxsanaayeen qoob ka ciyaarkiisa.
Link Video hoose ka daawo baashaalka Music ee Mahiga.
Aktoober 2, 2011 at 8:21 am
kkkkkkk ku waas magaca soomaalia ayay ceebeeyeen iyo hablaha somlia may inan somaliyeed la dhanisaan
Aktoober 2, 2011 at 1:48 pm
Kkkkkkk.adeer gabar wadan gaala joogta oo hees iyo jaaz gaala kahorsamaynayso awalbay bilaa caqiido ahayd waayo hees iyo jaas waadhaqamada gaalada yaa ubaneeyey waa dadkaa mujaahidiintu dhaqan celinta usamayn rabaan shirku haduu mid muslim yahay oo ay soo abaabuleen wadama islaami xataa dumarku kama qayb qaadan karaan waa hadaanu kusalaysnayn mid allaah iyo rasuulkiisa loogu dhowaanayo xataa kaa waa inay lasocotaa muxrimkeeda kitaabka qofki ilooba suudoonuu yeelaa Waxaanse kabaqayaa shirka lagu qaban doono garowe inay sidaa ula jaasaan dimoqraadiyadaa qabta amba waxaan kabaqayaa in gaalada kasoo qaybgalaysa gabdha lagu martiqaado laseexda waayo si alla oo gaal lagu marti geliyo madaxdiinaa diyaar u ah (xirsixuseen4@hotmail.com)
Aktoober 2, 2011 at 3:46 pm
hahaha Mahigaa waa Nin fican Wuxuu Istahilaa in u Somalida la Xidido Raga Somaliyeed ha Joojiyeen Hinaaska Oday Mahigaa ha soo dhoweyeen. Magciisa ayaan ku adkeyn Somalida Waxaan u malaynayaa Sababtaas Darteed aya u Sahashay in u si Fudud ula jaan qaadoh Somalida MAHIGAAAA
Apriil 3, 2012 at 9:21 pm
inshalah ma higa gacantena ayuu kubaxa hadan anahay somali waxuu cadaystay inuu na dhibbo sankadhuudhiga xunka ah kuwa la jogana somali mahan waa munafaqiin ilahayna munfaq iyo gal cadaab alim ah ayuu udiyaariyay